Re ahịa ndị Konecranes na mgbe a gbasasịrị ahịa na-eme nke ọma. - China Qingdao CO-NELE Group
Re ahịa ndị Konecranes na mgbe a gbasasịrị ahịa na-eme nke ọma.
Onye ahịa Jiangxi, ụgbọ mmiri Dongfeng 30m
N’oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ natara oku n’aka Maazị Zhang nke Jiangxi onye zụtara pọmpụ igwe na ụlọ ọrụ anyị ọnwa isii gara aga. Na ekwentị, o kwuru na ya ga-azụta igwe ihe ọzọ na afọ a.
Maazị Zhang rụrụ ụlọ ọrụ mgbazinye ego. Ọ zụtara igwe na-akwụ mmiri igwe na-akwụ ụgwọ site na ụlọ ọrụ anyị ọnwa isii gara aga. Dabere na Maazị Zhang, mba ahụ paidara ntị na nrụpụta n'ime ime obodo n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Constructionlọ a na-ewu n’ime ime obodo adịbeghị obere ka ọ na -abu. Waslọ a bụ ụlọ pere mpe, mana n'ihi ụkọ ikike mmadụ pere mpe, ọ bụ ihe na-esighi ike ịkwanye simenti n’ebe elu ụlọ dị. N'afọ gara aga, site n'echiche nke ịnwale, azụrụ m Konecrale pump pump pump ma gbazite ya ndị ahịa. Onye ahịa ahụ mechara kọọ na ọ mara ezigbo mma. Ọ na-azọpụta oge, a na-azọpụta ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọma. Naanị ihe ndọghachi azụ bụ na mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ ọzọ na-agbazite ụgbọ ala.
Ya mere, Maazị Zhang kpebiri ịzụta ngalaba abụọ ọzọ na njedebe nke afọ. Mazị Zhang kwuru na ya nwere ike ịmalite azụmahịa ya mgbe oge opupu ihe ubi nke afọ na-esochi. Isi okwu bụ na o kwesịghị ichegbu onwe ya banyere nlọghachi oge dị anya, n'ihi na ihe a na-achọ buru ibu, yabụ ugbu a, iwu azụmahịa na-agbakọta ọnụ, gbakwunyere 'ire ahịa Konecranes na mgbe ịre ahịa na-eme nke ọma, ma ị na-enye onyinye' t echegbula onwe gị banyere nsogbu ọ bụla. Naanị họrọ Konecranes.
Konile bụ nnukwu ụlọ ọrụ akụrụngwa na-ewu ụlọ na-ejikọta nyocha sayensị, mmepụta, ahịa na ọrụ mgbe azụchara ahịa. Pụrụ iche na mmepụta nke pọmpụ pịakọl ọkpọkọ, igwe na-ekesa ihe, igwe nzipu mmiri, igwe ịpị mmiri, pọmpụ okwute, pọmpụ mmiri, pọmpụ mmiri, obere nfuli, obere nfuli-igwe, na-agwakọta traktọ, igwe nkwụ ụfụfụ simenti. , nfuli na-aga n'ihu na igwe na-ewu ihe na akụrụngwa dịka ndị na-eri nri, pọmpụ mmiri na-egwu mmiri, na nfuli egwuru egwu bụ ezigbo teknụzụ na njiri mara mma. Nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi na-abịa ka ha jụọ ase ma nye iwu!
Oge nzipu ozi: Mee-19-2020